IVolocopter Chengdu: Iprojekthi yenqwelomoya entsha yaseJamani-yaseTshayina ibhengeziwe
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » uhambo ngomoya » IVolocopter Chengdu: Iprojekthi yenqwelomoya entsha yaseJamani-yaseTshayina ibhengeziwe
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zase China eziQhekezayo • Iindaba zaseJamani zokuPhula • Utyalo mali • iindaba • abantu • Xanduva • Technology • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel
I-UAM ibhekisa kwindlela entsha yothutho yasezidolophini esebenzisa ukuhamba ngokuthe nkqo kombane kunye nokufika (eVTOL) ngenqwelomoya ukuhambisa abantu okanye iimpahla ngaphakathi kweendawo ezisezidolophini nasezidolophini. Inceda ukukhulula uxinzelelo kwiindlela ezixineneyo zedolophu kwaye ivumela abantu kunye neempahla ukuba bafikelele kwiindawo zabo ngokukhawuleza nangokhuseleko.
Iqela laseVolocopter laseJamani kunye neGeely Holding Group ukumisela indibaniselwano eChengdu, China.
Eli phulo lidibeneyo liya kuthatha uxanduva lokuvelisa kunye nokuthengisa kwintengiso yeemveliso zeVolocopter kwintengiso yaseTshayina.
Indibaniselwano iceba ukunceda ukukhuthaza ukuhamba komoya edolophini eTshayina kwiminyaka emithathu ukuya kwemihlanu ezayo.
Inkampani entsha edibeneyo yeenqwelomoya, ebizwa ngokuba yiVolocopter (Chengdu) Technology Co, Ltd., okanye iVolocopter Chengdu ngokufutshane, ibhengezwe yiVolocopter yaseJamani, ingcali ekwenziweni kwezithuthi zomoya ezizimeleyo, kunye nenkxaso yesibini yeGeely Holding Iqela.
Eli phulo lidibeneyo liza kuba seChengdu, ikomkhulu lakumazantsi-ntshona eTshayina kwiPhondo laseSichuan, kwaye iya kujongana nemveliso kunye nokusebenza kwemakethi kwiimveliso zeVolocopter kwintengiso yaseTshayina.
IVolocopter Chengdu ikwatyikitye iiodolo kunye neVolocopter yeenqwelomoya ezili-150, kubandakanya izinto ezingafakwanga zithuthi zomoya kunye neenqwelo moya.
Izithuthi zomoya kunye neenxalenye zazo ziya kuveliswa eHubei Geely Terrafugia, isiseko semveliso seGeely e China, ngokutsho kwendibaniselwano.
IVolocopter Chengdu izakuzimasa i-13th China International Aviation and Aerospace Exhibition (Airshow China) nge-28 kaSeptemba.
"Namhlanje kuphawula elinye ibakala elibalulekileyo kuhambo lwethu lokuzisa ukuhamba komoya ombane ukuya e-China, elona thuba likhulu lemarike kwishishini le-UAM," utshilo uFlorian Reuter, CEO we IVolocopter.
IVolocopter okwangoku yeyokuqala kwaye kuphela kumenzi wenqwelomoya we-eVTOL ofumene uyilo kunye nemveliso yokuvunywa kuyo I-Arhente yoKhuseleko kuLwazi lwezoPhapho.